सेनाद्वारा विद्रोहीको कारागारमा आक्रमण, एक सय बढीको मृत्यु
साना, १६ भदौ (एएफपी) । साउदी अरब नेतृत्वको सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा परी यमनमा पछिल्लो समयमा १०० जना मारिएको रेडक्रसको अन्तर्रा्ष्ट्रिय समितिले आइतबार जनाएको छ
म्यान्मारमा शक्तिशाली भूकम्प
यांगुन, १७ भदौ (सिन्ह्वा) । म्यानमारमा आइतबार राति आएको ६ म्याग्नीच्यूडको भूकम्पका कारण मन्दिर तथा विद्यालय भवनहरु भत्किएका छन् । देशको सागाङ क्षेत्रमा आएको भूकम्प धेरै ठूलो नभएकाले मानवीय क्षति
वासिंगटन, १५ भदौ (एएफपी) । विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आउने त्रासका बीच नयाँ व्यापार सम्झौता गर्न चीनमाथि दबाब दिने उद्देश्यले संयुक्तराज्य अमेरिकाले आइतबार (आज)देखि लागू हुनेगरी चिनियाँ सामानको आयातमा नयाँ करहरु
ह्युस्टन, १५ भदौ (सिन्ह्वा) । अमेरिकामा फेरि अर्को गोलीकाण्ड भएको छ । शबिनार भएको उक्त घटनामा परी पाँच जनाको मृत्यु भएको छ भने २१ जना घाइते भएका छन् । देशको
दुई दशकपछि अफगानिस्तान छाड्दै अमेरिकी सेना !
वासिंगटन, १३ भदौ (एएफपी) । अल–कायदा विद्रोही समूहले सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा न्युयोर्कस्थित ट्वीन टावर आक्रमणपछि अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेको थियो । त्यसपछि अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना प्रवेश गरेको
अमेरिकामा बेरोजगारी भत्ता लिनेको संख्या बढ्दै
वासिंगटन, १३ भदौ (सिन्ह्वा) । संयुक्तराज्य अमेरिकामा गत साता बेरोजगारी भत्ता लिने दरमा सामान्य वृद्धि भएको अमेरिकी श्रम विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार अगस्ट २४ सम्ममा अमेरिकामा बेरोजगारी भत्ताका
वार्ता निष्कर्ष नजिक : के अब अफगानिस्तानमा युद्ध समाप्त होला ?
काबुल, १२ भदौ (एएफपी) । अफगानिस्तानमा वर्षौंदेखि जारी सशस्त्र संघर्ष अन्त्य गर्ने उपायको खोजी गर्न संयुक्तराज्य अमेरिका र अफगानी विद्रोही समूह तालिबानबीचको वार्ता अन्तिम चरणमा पुगेको विद्रोहीहरुले जनाएका छन् ।
लिमा, ११ भदौ (एएफपी) । दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरुका पुरातत्वविदहरुले २२७ जना बालबालिकाको सामूहिक चिहान फेला पारेको जनाएका छन् । कोलम्बियाली चिमु संस्कृतिभन्दा धेरै अघिको अनुमान गरिएको यो चिहान आजसम्म
युनएचसीआरको चलखेल : शरणार्थीको केन्द्र बन्दै नेपाल
काठमाडौं । राज्य कमजोर बन्दा नेपाल विभिन्न देशका अवैध शरणार्थीहरुको केन्द्र बन्दै गएको छ । खासगरी द्वन्द्वग्रस्त देशका शरणार्थीहरु नेपाल आउने क्रम बढेको गृह मन्त्रालयको तथ्याङकले देखाएको छ । वर्षाैदेखि
टोकियो, ८ भदौ (एएफपी) । जापान र संयुक्तराज्य अमेरिकाबीच व्यापार सम्झौतामा सहमति भएको छ । विश्वका प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरुको समूह (जी७) को बैठकमा दुबै मुलुकका नेताबीच फ्रान्समा वार्ता हुनुअघि नै